नाटकको मोह नै गज्जब छ – जीवन जंग थापा
सर्वनाम थिएटरद्वारा आयोजित तेस्रो देशव्यापी १० मिनेट नाटक मेला गत पुस २१ गतेदेखि पुस २४ गतेसम्म चलेको थियो । यस नाटक मेलामा करिब करिब ९ दर्जन रंगकर्मीहरु र २५ जनाको हाराहारीमा नाटक कलाकर्मीहरुले सहभागीता जनाएका थिए, जसमा हाल अत्यन्त व्यस्त रहेका मोडेल जीवन जंग थापाको अभिनय तथा निर्देशन रहेको नाटक “२ नम्बरी” पुस २३ गते उक्त थिएटरमा मन्चन भएको थियो । उनै निर्देशक जिबन जंग थापासंग सुनिल बलालद्वारा गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छः
सुबः सर्वप्रथम नाटक मञ्चन गर्नु भएकोमा जीवनजी लाई वधाई छ ! अनि कस्तो रह्यो त १० मिनेट नाटक मेला को अनुभव जीवनजी ?
जीजंथाः धन्यवाद, कार्यक्रम रमाइलो रह्यो भन्नुपर्छ । दुःख भएतापनि १० मिनेट नाटक मेलाले धेरै कुरा सिक्ने मौका दिएको छ । हुन त मेरा लागि यो नै पहिलो अनुभव हैन । यो भन्दा पहिले पनि नाटक “असम्बद्ध” मा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको थिएँ, तर नाटक “दुई नम्बरी” मेरो एकल अभिनय र आफ्नै निर्देशन भएकाले बिशेष रह्यो ।
सुबः नाटक “दुई नम्बरी“ कस्तो खालको नाटक हो ?
जीजंथाः एक शिक्षित पढे–लेखेका युवाको कथासंग आधारित नाटक हो यो । हाम्रो समाजमा वा देशमा बिद्यमान बेरोजगारीको समस्याले सिर्जना गरेको परिस्थितीलाई यथार्थ रुपमा चित्रण गर्ने प्रयास गरिएको थियो, जसलाई किरण चापागार्इं भाईले वर्तमान समाजलाई इंगित गरेर एक राम्रो संदेशमुलक कथा लेखेका छन् । नाटक मञ्चनपछि पनि राम्रो प्रतिक्रिया पाइरहेका छांै ।
सुबः यो नाटकको तयारी र प्रदर्शनको लागि कतिको दुःख गर्नुपर्यो ?
जीजंथाः दुःख त हरेक कुरा गर्दा अर्थात काम गर्दा अवश्य नै गर्नुपर्दछ, तर मलाई नाटकमा काम गर्दा नै आनन्द आउछ, शायद आफुले रुचाएको क्षेत्र भएर होला जस्तो लाग्दछ ।
सुबः नाटकमा तपाईंको एकल अभिनय त थियो, तर त्यस्मा भ्रमिक पात्र धेरै देखाइएका थिए, यसलाई वास्तविक पात्रमा देखाउन सके राम्रो बन्थ्यो होला कि लाग्यो ?
जीजंथाः हो, तपाइले भन्नु भएको ठिक हो । एकल नाटक आफंैमा एक चुनौती हो । तपाईंले भन्नु भएको जो भ्रमिक पात्र छन् मैले दर्शकलाई नै ती पात्र बनाउन प्रयास गरेको थिएँ किनभने यो १० मिनेटको समयमा एक युवाको पुरै कथा समेट्न अलि गाह्रो कुरा थियो ।
सुबः निर्देशन एक आफंैमा चुनौतीपूर्ण कार्य भनिन्छ, तर तपाईंले त आफंै नै पहिलो पटक निर्देशन गर्दै आफंंैले अभिनय गर्नुभयो ?
जीजंथाः हो, तपाईंले सहि भन्नु भएको छ, निर्देशन आफंैमा एक गाह्रो कुरा हो । आनै निर्देशनमा आफंैले अभिनय गर्नु र त्यो पनि एकल नाटक अवश्य अलि बढी नै मेहनत गर्नु पर्यो । तर गुरुहरु तथा साथीभाईको सहयोगले अन्ततः केहि हदसम्म सफल भएको महशुस भईरहेको छ ।
सुबः तपार्इं विगत एक वर्षदेखि धेरै म्युजिक भिडियोतिर पनि व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यो सबै छोडेर नाटक तिर किन लाग्नुभयो ?
जीजंथाः हैन त्यस्तो भन्न अलि नमिल्ला । मंैले म्युजिक भिडियो गर्न छोडेको चै हैन, तर यो नाटकको मोह नै गज्जबको छ । यद्यपी मंैले समय मिलेसम्म म्युजिक भिडियो, विज्ञापन, पैmसन शो, रेडियो नाटकहरु पनि गरि नै रहेको छु । अभिनयमा निखार ल्याउनको लागि थिएटरको पनि आवश्यकता जरुरी भएको देखेर नाटकतिर पनि लागेको हुँ ।
सुबः तपाईंले रेडियो नाटकको पनि कुरा गर्नुभयो, त्यो कस्तो खालको रेडियो नाटक हो र कस्तो खालको भूमिकामा हुनुहुन्छ ?
जीजंथाः यो डोटेली भाकाको रेडियो नाटक “भन्नि छिन आमा” हो । जसलाई Equel Access Nepal ले निर्माण गरिरहेको छ । जसमा म एक हेल्थ असिस्टेन्ट गजेन्द्रको भूमिका निर्वाह गर्दैछु । यो नाटक सुदुर पश्चिमका प्राय सबैजसो रेडियोमा प्रसारण हुनेवाला छ ।
सुबः रेडियो नाटक र थिएटरमा हुने नाटकमा के फरक छ ?
जीजंथाः अभिनय त दुबैमा जरुरी छ । रेडियो नाटकमा पनि इमोसनमा काम गर्नुपर्छ । यति फरक हो थिएटरमा दर्शकले प्रत्यक्ष हेर्न पाउनु हुन्छ ।
सुबः तपाईंले म्युजिक भिडियो, विज्ञापन, फैसन शो, अनि नाटकमा काम गरिसक्नु भयो, अब फिल्ममा कहिलेसम्म देख्न पाउँछन् त दर्शकहरुले ?
जीजंथाः अहिले त त्यस्तो केहि Plan छैन । अलि समय आफ्नो अभिनयमा नै निखार ल्याउन नाटक मै मेहनत गर्छु । यदि राम्रो प्रोजेक्ट र राम्रो टिमले अफर गरे काम गर्न सकिन्छ ।
सुबः जीवन जंग थापाका आगामी कार्य योजनाहरु के के छन् ?
Feb 14 लाई टार्गेट गरेर एक रोमान्टिक लव Song गर्ने कुरो भएको छ, चाँडै अर्को नाटकको रिहर्सल शुरु हुँदैछ, त्यसका अलावा रेडियो नाटक विज्ञापनहरुमा त काम गरिरहन्छु ।